China BONOVO Undercarriage Parts Excavator Bulldozer Track Shoe Plate Assembly factory sy mpamatsy | Bonovo
farany Ataovy mitovy tantana
loko Mainty na mavo
Fampiharana Excavator, Loader, Bulldozer.etc.
Hardness ambonin'ny HRC37-49
Marika sy maodely fanovozan-kevitra
Azo ampiharina amin'ny milina karazana làlana rehetra
Ahoana ny fomba hisafidianana fahendrena amin'ny sakan'ny kiraro?
Ampiasao ny masininao hikirakira ny toetoetran'ny tontolo iainana voafaritra, amin'ny fampiasana kiraro tery indrindra izay mbola manome flotation sy fiasa sahaza.
Ny kiraro tery loatra dia hahatonga ny milina hilentika. Mandritra ny fifandimbiasana dia mihetsiketsika ny faran'ny lamosin'ny masinina, ka mahatonga ny fihoaram-pefy tafakatra ambonin'ny tampon'ny kiraro izay avy eo latsaka ao anatin'ny rafitra rohy-roller rehefa mihetsika hatrany ilay masinina. Ny fitaovana voafintina mafy namboarina teo ambonin'ny boaty dia mety hiteraka fihenan'ny fiainana noho ny rohy mihetsiketsika manerana ireo entana feno fonosana, izay mety hiteraka tsy hampihodina ny roller;
Na izany aza, ny kiraro somary malalaka kokoa dia hanome flotation tsara kokoa ary hanangona fitaovana kely kokoa satria lavitra lavitra ny rafitra rohy-roller ny fitaovana. Fa raha misafidy kiraro malalaka loatra ianao, dia mety hiondrika sy hitresaka mora kokoa izy ireo, hahatonga ny fitomboan'ny fitomboan'ny singa rehetra, mety hiteraka tonon-taolana maina aloha loatra, ary mety hamaha ny fitaovan'ny kiraro.
Sambany mividy avy any Shina? Zahao ity fomba fizahana ity
Teo aloha: BONOVO Undercarriage Parts Excavator Track Shoe Plate SK100, SK200, SK300, SK320
Manaraka: BONOVO Undercarriage Parts Excavator Track Shoe Bulldozer Track Plate Assembly
kiraro lalana bulldozer
pad excavator vy lalana
kiraro lalana excavator
kiraro ho an'ny lalana
kiraro grouser telo